Waa Kuma Gudoomiyaha Cusub ee Golaha Shacabka - Halbeeg News
Waa kuma Gudoomiyaha Cusub ee Baarlamaanka 10aad ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cadbiraxmaan?
Guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Waxaa uu ku dhashay magaalada Baydhabo sanadka markii uu ahaa 1957-dii, isagoo isla magaaladaas ku qaatay waxbarashadiisa dugsiga hoose illaa dugsiga sare oo uu ka qalin jabiyay dugsiga Sheekh Aweys.
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaana ayaa Guddoomiye ku xigeen kasoo noqday magaalada Baydhabo sanadihii u dhexeeyay 1993-1995-kii.
Sanadka markii uu haa 2009-kii ayaa uu Maxamed Mursal noqday Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 8aad ee dowladdii ku meel gaarka aheyd ee lagu soo dhisay Jabuuti isaga oo isla sanadkaas xukuumaddii Cumar Cabdirashid ka noqday Wasiirka hantida qaranka.
Mudane Maxamed Mursal ayaa sanadkii 2012-kii loo magacaabay Safiirka Dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya isaga oo wax badan ka qabtay dhismaha iyo qaabeynta xiriirka labada dal.Mudane Mursal ayaa mudo 3 sano ah joogay safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Turkiga.
Sanadkii 2015-kii ayaa mar kale, Xukuumaddii uu hogaaminayay Cumar Cabdirashid loo magacaabay Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha.
Maxamed Mursal Sheekh ayaa sanadkii 2014kii Jaamacadda Culuum iyo Tecknolojiyada ee magaalada Sanca dalka Yemen waxaa uu ka dhameeyay cilmiga Arrimaha bulshada .
Doorasha ka dhacday Beydhabo Maxamed Mursal ugu soo baxay in uu kamid noqdo Xubnaha Baarlamaanka 10aad ee uu hadda hogaamin doono.
26-kii bishii November sanadkii hore ayuu Ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre u magacaabay wasiirka gashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya isagoo jagadaasi iska casilay isbuucii hore si uu ugu tartamo xilka gudoomiyaha baarlamaanka 10aad ee uu baneeyay Mudane Jawaari laba isbuuc ka hor.
Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan u doortay Guddoomiyaha Golaha shacabka kadib doorashadii shalay ka dhacday xarunta golaha shacabka.
Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ayaa hadda culuumta Xiriirka caalamiga iyo dilbloosiyada ka barto Jaamacad ku taalo dalka Uganda.
Saddex Qof oo Ku Gerriyootay Roobab Mahiigaan ah oo Ka Da’ay Hargeysa